Warshadda weelka miiska yar - Soosaarayaasha weelasha miiska yar ee Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Design Naqshadeynta Cute iyo Functional】 Ku dar midab qaar ka mid ah meheradaha farshaxankaaga oo leh cactus caddy aan la diidi karin! Kufiican keydinta qalin, qalin, qoraalada dhegta, maqaska, calaamadaha masixi qalalan iyo waxyaabo kaloo badan.
Construction Dhismaha looxa adag ee adag】 Ka samaysan dabiici aan sun ahayn Dhoobada iyo rinjiga bey’ada u fiican, kuna habboon dadka waaweyn ama carruurta 3yrs +.
Need Looma baahna Isku soo uruurinta】 Waxaad ku ridi lahayd xafiiska, fasalka, miiska waxtarka, xarunta farshaxanka, qolka jiifka..Tani waxay kuu suurta gelisay inaad yareyso weelka oo aad si fiican u abaabusho.
Ice Xulista Hadiyad Dhammaystiran】 Waxay kujirtaa xirxirida sanduuqa hadiyadaha adag, hadiyada ugufiican macalinka, ardayda, wiilasha & gabdhaha yar.
【Miiskaaga ha ahaato mid hagaagsan】 Weel qalin qalin ah oo midab badan leh oo keydiya qalimaanta muhiimka ah, qalimaanta & istaaga oo ka dhigaya miiskaaga qashin-qasan & hagaagsan.
Naqshadda RETRO - Biyahaani waxay yeelan karaan dib u habeyn iyo naqshad guridda oo qurxin kara isla markaana kaabi kara beertaada.
PUMPKIN STYLE - Mister dhir leh naqshad bocor oo midab kala duwan leh.
SAMEEYSAN KARTA NOZZLE - atomization wanaagsan, biiyaha hagaajin karo, buufin kara ceeryaamo ama khadka toosan.
Naqshadeynta 'NOZZLE LONG' - Waxay la imaaneysaa masax dheer oo balaastig ah, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku waraabisid dhirta yaryar si fudud.
CODSIGA BADAN - Waa mid ku habboon dhammaan baahiyaha qoyskaaga oo ay ka mid yihiin nadaafadda, abuurka, wax soo saarka nadiifinta, saliidaha lagama maarmaanka ah, dhirta iyo ubaxyada ku faafaya, caleemaha qallalan iyo daaqadaha nadiifinta. iyo adeegsiyo kale oo badan.
Qurxinta Dollhouse or Muxuu yahay hab quruxsan oo lagu heli karo Dollhouse-kaaga aad ugu jeceshahay! Tan u hel sidii mid dheeri ah oo loogu talagalay guriga caruusaddaada, ama keligeed! Waxaa ku jira wax kasta oo aad ugu baahan karto inaad ku ciyaarto oo aad iska dhigto.
G Hadiyad Kaamil ah Fig Sawirada Ciyaarta ee Super Durable waa kuwa kufiican gacmaha yar! Wanaagsan Sawirka Cayaaraha iyo Isugeyn Wanaagsan oo loogu talagalay Soo-ururintooda Dollhouse.
To Horumarka Caruurta ets Riwaayaddan xiisaha lihi waxay kor u qaadaan horumarka garashada caafimaadka iyagoo u maraya ciyaar iska dhig ah Jilitaanka sheekooyinka sheekadu waxay jimicsi ku sameyn doonaan sheeko iyo geedi socod feker xasaasi ah, halka xirfadaha dhaqdhaqaaqa wanaagsan iyo habacsanaanta ay hagaageyso iyadoo kuwa yaryar ay maareeyaan jawiga xiisaha leh.
Material Qalabka Nabdoonaanta fin Dhammeystir aan sun ahayn iyo qalabka badbaadada carruurta.
【Fiiro gaar ah】 Sheygan maahan cabir nololeed, waxaa kaliya loogu talagalay qurxinta, iyada oo aan wax qabad la taaban karo lahayn.
Bacda dhalada lagu shubo ama dhalada
Waxyaabaha: muraayadda aan dabaysha lahayn, bir bir ah oo aan la jaan qaadi karin oo ay weheliso xarigga hemp gacanta, qaabka waddanka Mareykanka.
Kan shumaca haysta wuxuu siinayaa shumac, isagoo soo jeedinaya in markii shumaca gubto, dhaqaajin gacanta.
Waxaad sidoo kale qurxin kartaa booskaaga sida weel, dhig geedka, ama waxaad u ekeyn kartaa dhir.
Haddii aad u maleyneyso in shumaca dhabta ah uu qatar yahay, waxaad dhigi kartaa shumac elektronik ah.
Wixii nostalgia moodada ah, dadka casriga ahi waxay si isa soo taraysa u isticmaalayaan laambadda, shumacyo lagu qurxiyo guriga, waxay sare u qaadaan jawiga.
Ka samaysan galaas bilaa lacag ah
Naqshado Casri ah oo Casri ah oo ay sameeyeen xirfadlayaal
Loogu talagalay in si fudud loo isticmaalo loona kaydiyo, ku habboon munaasabadaha oo dhan